Warranty Policy - Shenzhen Macverin Electronics Co., Ltd
Shenzhen BoRun Electronics Co., LTD uqinisekisa izinto kunye nemveliso ethengisa ukuba simahla isiphako kwiindawo nokusetyenzwa kuba ixesha ukususela kumhla ukuthunyelwa. Phakathi konyaka omnye siza kunikela inkonzo yokulungisa ngaphandle kwentlawulo olongezelelweyo umthengi. Zonke iziqinisekiso akuvumelekile ukuba umba wabuya okanye imveliso ufunyaniswe ukuba sele kakubi, baphathwe gadalala, phina, mishandled, phosakeleyo, silungiswe okanye zatshintshwa nangayiphi na indlela okanye ebangelwe naluphi na uhlobo intlekele yendalo.
Ngelo xesha, zingadlulanga iintsuku ezisi-7 emva kokubeleka, oko ifumaneka imali okanye izinto exchange ukuba naziphi na iingxaki esemgangathweni.
In Warranty - Unyaka omnye
Zonke izinto babuya baya walungiswa simahla ngemigudu Isigxina eziphathekayo njengoko into okanye imveliso lingekapheli ithuba isiqinisekiso (ngaphandle mthethweni keleyo). Kulo iindleko Ngokwemiqathango yokuthumela iya kwabelwane ngawo ngamaqela omabini.
Out-of-warranty into okanye imveliso kwinkonzo yokulungisa ziya kuvavanywa yi-RSC (RMA Service Uqinisekiso) kunye iindleko eziqikelelweyo iinxalenye kunye nabasebenzi.
Customer kufuneka bavumelane intlawulo intlawulelo yothutho bebuyela yenqaku kulungiswa okanye imveliso yi "EX-ESEBENZA" elide yokuthumela kwi mveliso wethu Shenzhen China. (Omabini amaqela lokuthumela iindleko iza kuba noxanduva ngabathengi.)